Otu esi etinye Google Chrome na Ubuntu 20.04 na 21.04 - LinuxCapable
Otu esi etinye Google Chrome na Ubuntu 20.04 na 21.04
July 13, 2021 Nwere ike 28, 2021 by Jọshụa James
Nwụnye nke Google Chrome Nhọrọ Terminal
Nwụnye nhọrọ eserese Google Chrome
Sistemụ dabere na Linux na-abịa na Firefox maka ọtụtụ. Otú ọ dị, gịnị banyere Google Chrome? Ọ dị maka sistemụ arụmọrụ Linux? Azịza ya bụ ee. Ọ bụ n'ezie. Google Chrome bụ ihe nchọgharị weebụ kachasị eji eme ihe n'ụwa ugbu a. N'April 2021, Chome nwere 64.47% nke ahịa dị ugbu a, ebe onye asọmpi na-esote bụ Safari na 18.69%, wee Firefox na 3.59%. Chrome anọwo na Linux nwa oge mana ọ na-eche asọmpi ọzọ ihu Microsoft Edge Beta ịbụ na ahịa na nso nso a; Otú ọ dị, Chrome bụ nhọrọ maka ọtụtụ ndị ọrụ Linux enweghị mmasị na ntinye nke Firefox.
Google Chrome nwere otu njirimara: onye ọ bụla nwere obi ụtọ na Google gbakwunyere nkwado "cache azụ" na ụdị Chrome kachasị ọhụrụ. Mpụta mbụ na gam akporo na Chrome 87 abụrụla nke a na-ahụkarị na ntọhapụ 92 na-abịa. Mgbanwe a na-enye chrome ohere idowe ibe ikpeazụ ị gara na ebe nchekwa otu oge. Ihe ọhụrụ Chrome mere na-eme ka ọ laghachi azụ na n'ihu n'etiti ibe na-agba ọsọ ọsọ. N'okpuru ebe a bụ nkọwa sitere na google mmepe eri:
Anyị ebugolarị atụmatụ a maka android. Anyị chọrọ ịmalite iji cache na-aga n'ihu na gburugburu desktọpụ nwalee.
Yabụ, ọ dị mma? Mana kedu ka anyị ga-esi tinye Google Chrome? Anyị edeela ntuziaka ebe a iji nyere gị aka ịwụnye na Desktọpụ Ubuntu yana nhọrọ ọnụ na eserese. Ntuziaka na-esonụ na-arụ ọrụ maka ụdị 20.04.02 na 21.04.
Tinye iwu ahụ ka ijide n'aka na sistemụ gị adịla ọhụrụ.
Gbaa mbọ hụ na etinyere wget.
Budata ụdị Google Chrome ọhụrụ maka ngwugwu Linux .deb.
Na-esote, anyị na-agba ọsọ iwu iji wụnye:
Ị mechaala ịwụnye Google Chrome na Ubuntu. Gaba ka ịchọta ya na ngwa ngosi gị.
Gaa na ibe nbudata maka Google Chrome site na ịpị ebe a ma ọ bụ detuo na mado adreesị a: https://www.google.com.au/chrome/.
Pịa Download Chrome.
Sistemụ dabere na Ubuntu ga-ahọrọ ngwugwu .deb, ahọrọla .rpm, ma ọ bụ nrụnye agaghị arụ ọrụ. Na-esote, pịa nnabata wee wụnye dị ka n'okpuru.
Ọzọ, anyị pịa "Chekwa faịlụ" na OK.
Gaa na ndekọ nbudata gị, chọta ngwungwu Google Chrome, pịa aka nri wee kụọ "Mepee na Wụnye Software".
Mgbe ị na-ahụ ugbu a na ebe awụnyere ngwanrọ, Google Chrome dị njikere itinye ya, pịa wụnye dị ka ọ dị n'okpuru.
Tinye paswọọdụ gị iji chọpụta.
Ekele, ị tinyela Google Chrome. Ị nwere ike ịhụ ihe nchọgharị ahụ na ngwa ihe ngosi gị dịka anyị gosiri maka nrụnye desktọpụ ọnụ n'akụkụ mmalite nke ntuziaka anyị.
Linux Google Chrome bụ ngwa ngwa na ịrụ ọrụ nke ọma dị ka isi Windows na Mac OSX. Otu ihe m nwere bụ na Google ebelatala ojiji ebe nchekwa Chrome, na-ekwu na Windows belatara 22% yana OSX 8% na Linux ekwughị ya, yabụ enyeghị mmelite ebe nchekwa ọ bụla. Ogologo oge, ị ga-ahụ Google na-etinyekwu ego n'ime ka Chrome rụọ ọrụ nke ọma dị ka Windows, nyere uto na Linux ewu ewu. Maka ugbu a, ndị ọrụ Linux ga-achọ ka ha na-eleba anya na enweghị elekwasị anya ma e jiri ya tụnyere nyiwe ndị ọzọ bụ isi.
Categories Ubuntu Tags Nchọgharị Google Chrome, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo
Otu esi etinye phpBB na Nginx (LEMP) na Ubuntu 20.04
Otu esi etinye WordPress ModSecurity Rule Set (WPRS)
2 echiche na "Otu esi etinye Google Chrome na Ubuntu 20.04 na 21.04"
May 28, 2021 na 3: 48 pm
Daalụ maka ndu nwoke m
May 28, 2021 na 8: 00 pm
Enweghị nchekasị! Daalụ maka nzaghachi 🙂